United News Myanmar - Page2of 109 - Manchester United News
မန်ယူနိုက်တဒ်ရဲ့ တတိယမြောက်ခေါ်ယူမှု့ ဖြစ်စေမယ့် ပေါ်တိုဘယ်နောက်ခံ ကစားသမား အဲလက်စ်တဲလက်စ် က အလုံးစုံ သဘောတူညီမှု့ရရှိပြီး‌နောက် အဂ်လန်ကို ဆေးစစ်ရန် ထွက်ခွာလာပေမယ့် လမ်းတစ်ဝက်မှာပဲ ပေါ်တူဂီကို လှည့်ပြန်သွားရပါတယ်။ စင်းလုံးငှားဂျက်လေယာဉ်နဲ့ မန်ချက်စတာ ကို ‌ထွက်ခွာလာပေမယ့် လေယာဉ် ပျံတက်ပြီး မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာပဲ လေယာဉ်မှာ ပြသနာ အနည်းငယ်ရှိနေလို့ လေယာဉ်မှုးက ပြန်လှည့်ခဲ့ပြီး ပေါ်တူဂီမှာ ပဲ ပြန်လည်ဆင်းသက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ …
ဖိအားတွေများလာတဲ့ ယူနိက်တဒ်အမှု့ဆောင်ချုပ် အဒ်ဝုဒ်ဝဒ်
မန်ယူနိုက်တဒ်အသင်းရဲ့ အပြောင်းရွှေ့ပေါ်လစီ၊စီးပွားရေးအခြေအနေ နဲ့ အသင်းမူဝါဒ ယိမ်းယိုင်မှု့တွေ နောက်မှာ အမှု့ဆောင်ချုပ် အဒ်ဝုဒ်ဝဒ် တစ်ယောက် အတော်လေး ဖိအားများလာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကာလရှည်ကြာ ပစ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့ ဂျေဒန်ဆန်ချို ကို မရရှိသေးတာက ဝုဒ်ဝဒ်အပေါ်ပဲ အရာအားလုံးပုံကျလာသလို လက်ရှိမှာ ယူနိုက်တဒ်အမှု့ဆောင်ချုပ်က မိသားစုလုံခြုံရေးကိုပါစိုးရိမ်တဲ့အနေထားရောက်နေပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီမှာ ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ် ခေါ်ယူရေး ကြန့်ကြာနေလို့ အိမ်ကိုမီးရှုးမီးပန်းတွေနဲ့ ပစ်ပေါက်ခံခဲ့ရပြီးနောက် အဒ်ဝုဒ်ဝဒ်က ယခုနွေရာသီမှာလည်း …
စိတ်ပျက်စရာ ကစားသမားများရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် နဲ့ ညနေခင်းတစ်ခုပျောက်ဆုံးခြင်း
ယူနိုက်တဒ်အတွက် ကပ်ဆိုးဆိုက်တဲ့နေ့လို့ ဆိုရမယ့် တနဂ်နွေနေ့ညအတွက် ဘယ်ကစားသမားကမှ ပြူံပျော်စေခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒိုင်ကစလို့ ဆိုးလ်ရှားနဲ့ အဒ်ဝုဒ်ဝဒ် အဆုံး ယူနိုက်တဒ် နဲ့ ပက်သက်သမျှဟာ အကျဉ်းတန်လွန်းတဲ့ တစပြင်လို စုတ်ပြတ်သတ်နေပါတယ်။ မြို့ပျက်ကြီးလိုတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ အိုးထရဒ့်ဖိုဒ့်သာ နာကျင်မှု့တွေထွေးပိုက်ရင်း အတိတ်ကိုသာ မျှော်ငေးနေမှာတော့အသေချာ။စိတ်ပျက်စရာညနေခင်းတွေကို ဘယ်လိုဆေးကျောရမလည်း မသိချင်တော့အောင် စိတ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့ ယူနိူက်တဒ်အပေါ် အရာရာကို မေ့ဖျောက်ခွင့်ရခဲ့ရင်လည်းကောင်းပါတယ်။အတိတ်ကခမ်းနားခဲ့ခြင်းတွေဟာအခုချိန်မှာ အသုံးမဝင်ကြောင်း ဒီကစားသမားတွေရဲ့ရမှတ်ကပြောနေကြောင်းဆိုးလ်ရှားကိုသိစေပါရဲ့…. ဒဟေးယား -၆ …
October 5, 2020 - by United News - LeaveaComment
ပေါ်တိုနောက်ခံလူ တဲလက်စ်ကို ယူရိုသန်း(20) ဖြင့်ခေါ်ယူဖို့ ယူနိုက်တက်တို့သဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့တွင်ပင် ဘရာဇီးသားဟာ ယူနိုက်တက်နှင့်ဆေးစစ်မှုကိုခံယူတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်တွင် ပထမ ပိုင်း၌ (4) ဂိုးပေး၍ ရှုံးနိမ့်ခဲ့မှုဟာ အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် ပထမ ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တိုက်စစ်မှူး ကာဗာနီကတော့ ယူနိုက်တက်ကစားသမားအဖြစ် ခံယူဖို့. မန်ချက်စတာမြို့သို့ရောက်လာပြီးဖြစ်ပြီး ယနေ့တွင် ဆေးစစ်မှု ခံယူမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ အေစီမီလန်သို့ တစ်ရာသီ …
မန်ယူနိုက်တဒ်အတွက်တော့ ၁၉၇၈ နောက်ပိုင်း စိတ်ပျက်စရာအကောင်းဆုံးခံစစ်မှတ်တမ်းကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတာနဲ့အတူ ဆိုးရွားတဲ့ညနေတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ အထူးသ ဖြင့် ကစားသမားအားလုံးက ပွဲထဲမှာ အာရုံစူးစိုက်မှု့မရှိနေသလိူ ဆိုးလ်ရှားရဲ့နည်းဗျူဟာတွေကလည်း လိဂ်သုံးပွဲရှိလာသည့်တိုင် အခြေ အနေဆိုးရွားနေဆဲပါပဲ။ယူနိုက်တဒ်ဟာ လင်ဒီလောဖ့်နေရာဘိုင်ယီအစားဝင်တာကလွဲရင် ဘရိုက်တန်နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲက လူစာရင်းကိုပဲ ပြန်လည်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ကြားရက် ကာရာဘောင်ပွဲမှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေကို မသုံးပဲလန်းဆန်းနေတဲ့ ကစားသမားတွေကိုအသူံးပြုခဲ့သည့်တိုင် ယူနိုက်တဒ် ကစားပုံနဲ့ခြေစွမ်းက ဆိုးဆိုးရွားရွားကို စုတ်ပြတ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဆိုးလ်ရှားအနေနဲ့ …
ယူနိုက်တဒ်သတိထားရမယ့် ဟိုဆေးမော်ရင်ဟို ရဲ့ ဝှက်ဖဲ
October 4, 2020 - by United News - LeaveaComment
ယူနိုက်တဒ်နဲ့ စပါးအသင်းတို့ရဲ့ ပွဲစဉ်က ယနေ့ည (၁၀:၀၀)မှာ အိုးထရဒ့်ဖိုဒ့်ကွင်းအတွင်းယှဉ်ပြိုင်ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုးလ်ရှားအတွက် မနှစ်က အသင်းကြီးတွေကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ စံချိန်က ဒီနှစ်မှာလည်း အားဖြစ်စေသည့်တိုင် ဟိုဆေးလို ဉာဏ်များတဲ့နည်းပြကိုတော့ဆိုးလ်ရှားအနေနဲ့အတော်လေးဂရုစိုက်ရပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် ယူနိုက်တဒ် တိုက်စစ်အကြောင်း ကောင်းကောင်းနောကျေနေတဲ့ ဟိုဆေး အတွက် သူပိုင်နိုင်တဲ့ ခံစစ်ဗျူဟာ က အလုပ်ဖြစ်နိုင်သလို မာတခ်ျ အားနည်းချက်ကိုသိထားတာကြောင့် ယူနိုက်တဒ်ကွင်းလယ်နဲ့ခံစစ်ကြားကို ဟိုဆေးက သေချာပေါက်ဖိအားပေးလာပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ …
အောက်တိုဘာပွဲကြပ်ကာလဖြတ်သန်းဖို့အတွက် ပြိုင်ဘက်တွေကို တပ်လှန့်လိုက်တဲ့ ဆိုးလ်ရှား
ယူနိုက်တဒ်ရဲ့အောက်တိုဘာပွဲကျပ်ကာလက မကြာခင်ရောက်လာတော့မှာ ဖြစ်ပြီး ဆိုးလ်ရှားကတော့ သူ့အနေနဲ့ ရလာဒ်ကသာ အဖြေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ တုံပြန်လိုက်ပါတယ်။ ယူနိူက်တဒ်ဟာ အောက်တိုဘာလအတွင်း စပါး(ယနေ့ည)PSG၊ချဲလ်ဆီး၊လိုက်ပဇ်၊အာဆင်နယ် တို့ကိုဆက်တိုက်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပြီး အသင်းရဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက် အခက်ခဲဆုံး ကာလကိုဖြတ်ကျော်ရမယ့် အနေထားကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။သို့ပေမယ့်လည်း ဆိုးလ်ရှားကတော့ တောင်တွေဟာ ထိပ်ရောက်အောင်တက်ဖို့တည်ရှိနေတာလို့ ဆိုလိုက်ပြီး စိန်ခေါ်မှု့တွေကို အနိုင်ယူဖို့ ရလာဒ်ကသာ စကားပြောမယ်လို့ ကြုံးဝါးလိုက်ပါတယ်။ ဆိုးလ်ရှားက”ကျနော်တို့ကစားရမယ့်ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့အခြေအနေအရ ရလာဒ်ကသာအရာအားလုံးအတွက် အဖြေပါလိမ့်မယ်။ကျနော့်အသင်းသားတွေရဲ့ ကြံခိုင်မှု့ကလည်းပိုကောင်းလာပါပြီ။ဒီပွဲတွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလည်းဆိုရင်ဝောာ့ ချန်ပီယံလိဂ်နဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ကြားမျှတတဲ့ …
တော့တင်ဟမ်နဲ့ပွဲအတွက် ဆိုးလ်ရှား ဘယ်သူတွေကို ပွဲထုတ်မလဲ ??
October 4, 2020 October 4, 2020 - by United News - LeaveaComment
ယူနိုက်တဒ်ရဲ့ စူဆပါဆန်းဒေး အရေးကြီးပွဲစဉ်အတွက် တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါးအသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့် ပွဲမှာ ဆိုးလ်ရှားအတွက် တစ်ချိန်ကလို တစ်ခါလာလည်းဒီလူပဲ မဟုတ်တော့တာ တော့ အသေချာပါပဲ။ယူနိူင်တဒ်ဟာ တောင့်တင်းခိုင်မာလွန်းတဲ့ ပထမအသင်းနဲ့ အတင့်အသင့် ရှိတဲ့ အရံအသင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ကြားရက်က အသင်းကို စနေ၊တနဂ်နွေမှာ ပြန်သုံးစရာမလိုအပ်တော့ပါဘူး။ ဂိုး – ဒဟေးယား ဒိန်းဟန်ဒါဆင်က ကြားရက်မှာလက်စွမ်းပြခဲ့သလို ဒဟေးယားအတွက်ဖိအားအနည်းငယ်ဝင်နေပါလိမ့်မယ်။ဒီညမှာ သူ့အနေနဲ့ နံပါ တ်တစ်ဖြစ်ဆဲဖြစ်ကြောင်းကိုထပ်ပြီး သက်သေပြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ …
ဆန်ချိုထက် ဘယ်သူ့ကို ဦးစားပေးခေါ်ယူသင့်သလဲဆိုတာ အကြံကောင်းပေးလိုက်တဲ့ ဝိန်းရွန်းနီ
ယူနိုက်တဒ် ဂန္နဝင်တိုက်စစ်မှုး ကြီး ဝိန်းရွန်းနီ ကတော့ ဆိုးလ်ရှား အနေနဲ့ တိုက်စစ်ပိုင်းကို ပိုမိုတိုးတက်စေချင်ရင် ဂျေဒန်ဆန်ချို လို တောင်ပံ ကစားသမားထက် ဟယ်ရီကိန်း ၊လီဝန်ဒေါစကီး တို့လို နံပါတ်ကိုးအထောင်တိုက်စစ်မှုးကိုခေါ်ယူသင့်တယ်လို့အကြံပေးလိုက်ပါတယ်။ ယူနိုက်တဒ်ဟာ ယခုရာသီမှာ ဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုခေါ်ယူဖို့အခက်ခဲဖြစ်နေပြီး ဒေါ့မွန်အသင်းဝောာင်းဆိုတဲ့ ယူရိုသန်း(၁၂၀) ကိုမပေးချေလိုတာကြောင့် ကြန့်ကြာနေချိန်မှာပဲ ဝိန်းရွန်းနီက ဝင်ရောက်အကြံပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဝိန်းက ယူနိုက်တဒ်မှာ မေဆင်ဂရင်းဝုဒ် လို …
ဗန်ဒါဘိခ့်ရဲ့ ကြီးမားတဲ့အားသာချက်တွေကို ပြောပြခဲ့တဲ့ ဆိုးလ်ရှား
မန်ယူနိုက်တဒ်အသင်းရဲ့ယခုအချိန်ထိ ‌ခေါ်ယူထားတဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ကစားသမားဖြစ်တဲ့ ဒွန်နီ ဗန်ဒါဘိခ့်ကနေရာများစွာကစားနိုင်စွမ်းရှိပြီး သူ့ရဲ့အရွေ့တွေက မှန်းဆရခက်တာကြောင့် ကြီးမားတဲ့ အားသာချက်ကို ရရှိစေတယ်လို့ ဆိုးလ်ရှားကဆိုပါတယ်။ ဗန်ဒါဘိခ့်ကယူနိုက်တဒ်ကိုရောက်ရှိပြီးနောက် လေးပွဲကစားထားပြီး နှစ်ပွဲသာပွဲထွက်ရသေးသလို တစ်ဂိုးသွင်း၊တစ်ဂိူးဖန်တီးပေးထားနိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိုင်းယက်စ်အကယ်ဒမီ ထွက်ဖြစ်တာနဲ့အညီ ဗန်ဒါဘိခ့် က နည်းစနစ်ပိုင်း တိုးတက်ကောင်းမွန်ပြီး ခြေစွမ်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းလည်းမြင့်မားတဲ့ ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗန်ဒါဘိခ့်ကဆိုးလ်ရှားအတွက်မတူညီတဲ့ ကွင်းလယ် ရွေးချယ်မှုကိုပေးစွမ်းသလို ပေါဂ့်ဘာနဲ့ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ် ကိုလည်း အနားရစေနိုင်မယ့်ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုးလ်ရှားက”ဒွန်နီကနေရာများစွာမှာကစားနိုင်ပြီး …